Shirkii Afrika iyo Talyaaniga oo lagu soo geba gebeeyay Milano “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Shirkii u dhexeeyay Dowladaha Afrika iyo Talyaaniga oo ay Soomaaliyan kujirto ayaa maanta lagu soo geba gebeeyay magaalada Milano ee dalka Talyaaniga, iyadoo Soomaaliya uu u matalayay Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ku sugan halkaasi.
Mudadii labada maalmood ahayd ee uu socday shirkan oo loogu magac daray (Afrika & Italy Business Week) ayaa diiradda lagu saaray sidii wadamada Afrika iyo Talyaaniga ay isaga kaashan lahaayeen ganacsiga iyo Dalxiiska..
Sida uu Wakaaladda SONNA u sheegay Agaasimaha Waaxda Dalxiiska ee Wasaaradda Warfaafinta mudane Cabdirisaaq Cabdi Cabdullaahi oo kamid ah wafdiga Wasiir Maareeye uu hoggaaminayo ee shirkaasi ka qeybgalay.
Wasiir Maareeye oo la kulmay qaar ka mid ah madaxdii shirka ka qeyb gashay
Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) iyo wafdigiisa ayaa shirkaasi ku soo bandhigay fursadaha dhanka ganacsiga iyo Dalxiiska ee ka jira Soomaaliya, maadaama dalka uu haatan ka soo kabanayo burburkii, isla markaana uu cagta saaray dhabihii horumarka.
Sidoo kale Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya ayaa kulamo gooni gooni ah la yeeshey qaar ka mid ah madaxdii ka qeybgashey shirka, waxaana ka mid ahayd Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Emanuela Claudia Del Re oo ay ka wada hadleen arrimo ay kamid yihiin xoojinta iskaashiga labada dal iyo in dowladda Talyaanigu ay taageerto qorshayaal lagu horumarinayo Warbaahinta dalka.
Khudbad uu ka jeediyay furitaanka shirka ayuu Wasiirku ku ammaanay dowladda Talyaaniga sida ay dhabarka ugu ridatay martigelinta muhaajiriinta Afrikaanka ah, kuwaasi oo dalkaasi galaya ,iyagoo ka gudbaya badda Mediterranean-ka ee isku xirta dalalka Afrika iyo Qaaradda Yurub.
Dowladda Talyaaniga ayaa ka mid ah wadamada galaangalka ku leh taageerada Soomaaliya, waxaana jira xiriir soo jireen ah oo ka dhexeeya labada dowladood, taasi oo fursad u siinaysa Soomaaliya in ay ka faa’ideysan karto barnaamijyadan horumarinta ganacsiga Dalxiiska.